Maxaa la siiyaa nin: fikradaha tikniyoolajiyadda, moodada iyo waxyaabo kaloo badan! | Ragga Stylish
Maxaa la siiyaa nin
Maxaa la siiyaa nin? Mararka qaarkood waxay qaadataa dhowr daqiiqo in la ogaado. Qaar kale, dhanka kale, ma jirto fikrad wanaagsan oo soo muuqanaysa inta jeer ee aad ku bixiso mawduuca.
Haddii aad ubaahantahay xoogaa dhiirigalin ah si aad go'aan uga gaarto hadiyada, hoosta waxaad ka heli doontaa fikrado badan. Maqaallada la xiriira tikniyoolajiyadda, moodada, guriga ... Liis dheer oo waxyaabaha kaa caawin doona inaad u hesho hadiyadda ugu fiican qofkaas.
4 Buugaag, muusig iyo filimo
5 Daryeel shaqsiyeed
Faa'iidada ugu weyn ee bixinta tikniyoolajiyadda ayaa ah inay tahay wax ficil ahaan qofna uusan iska caabin karin. Dabcan, in ay tahay maqaal farsamo kuma filna in la saxo. Waa lagama maarmaan in qalabka la sheegayo uu leeyahay waxtar iyo tayo la xaqiijiyay. Ku sharad waxyaalaha aad taqaanid ee ku siiyay waxqabad wanaagsan ama kuwa si fiican u hadlay ama leh qiimeyn heer sare ah.
Halkan waxaa ku yaal fikrado hadiyado la xiriira teknoolojiyad ah oo ragga ay tixgeliyaan. Maaddaama baaxadda ay aad u ballaadhan tahay, waa fikrad wanaagsan in la isku dayo in xoogaa la soo koobo. qiimeynta hadiyadaha qofka qaata iyo waxyaabaha uu hiwaayadda u yahay:
Maaddaama dharka uu yahay mid shaqsiyeed, ha ku khamaarin isbeddellada ugu dambeeyay oo sharad ku samee wixii aan waligood ka baxsanayn qaabka. Iyadoo aan loo eegin qaabkooda iyo da'da, qof kastaa wuxuu u baahan yahay qaybo qadiim ah oo ku jira dharka dharka, sida shaati buluug khafiif ah oo leh badhanka hoosta qoorta ama buluug buluug ah.
Haddii aad xirtid suud maalin kasta, fagaarayaasha jeebka iyo isku xidhka waxay kaa caawin doonaan inaad garaacdo calaamadda. Maaha wax kadis ah inay had iyo jeer ka mid yihiin waxyaabaha ugu horreeya ee maskaxda ku soo dhaca marka laga fikirayo waxa nin la siinayo. Laakiin xusuusnow in, sida dharka, marka ay timaado qalabka, waxay ku habboon tahay in la doorto midabbo caadi ah ama moodooyinka caadiga ah, sida karbaashyada, dhibcaha polka ama paisley.
Scarves iyo galoofyada ayaa sidoo kale aad u faa'iido badan, in kasta oo ay tahay inaad tixgeliso waqtiga sanadka. Haddii aan isla markiiba la isticmaali karin, hadiyaddu waxay lumisaa soo jiidashadeeda. Dabcan, waxaa jira waxyaabo ka reeban; tigidhada riwaayadaha iyo tigidhada diyaaradaha, tusaale ahaan.
Qalabka lagu raro alaabada sidoo kale waa ikhtiyaar weyn oo la siin karo lab iyo dhedig labadaba. Shandadaha shandadaha, shandadaha, boorsooyinka garbaha, boorsooyinka dhabarka, boorsooyin, kaararka haysta ... Tayada lagu raadinayo kiiskan waa xarrago. Ka fikir madow, maqaar, iyo khadad nadiif ah. Waqti la'aanta waxay u egtahay inay sifiican ula socoto wax walba. Marka laga eego dhinacaas, waa habka ugu gaaban ee lagu garaaco hadiyadda moodada ah.
Hadiyadaha waxtarka leh ayaa inta badan la qadariyo muddada dheer, oo marka ay timaaddo guriga waxaa jira waxyaabo badan oo la kala doorto. Laga soo bilaabo qalabka muraayadaha (muraayadaha khamriga, muraayadaha is biirsaday ama a decanter-ka whiskeyga iyo muraayadaha indhaha) qalabka yaryar, sida kafee sameeyaha, dhalo wanaagsan oo khamri ama isug ah.
Oo maxaa diidaya wax la xiriira qurxinta? Guri kasta waxaa ku yaal boos rinjiyeyn ama jaantus ku daraya fasalka guud ahaan. Hadana haddii aad jeclaan laheyd hadiyada inay sidoo kale door ka ciyaarto guriga marka lagu daro qurxinta, tixgeli shumacyo udgoon. Weligaa ha dhayalsan awooda urta wacan.
Buugaag, muusig iyo filimo
Inta buugta laga hadlayo, sharadka aaminka ahi waa sheekadii ugu dambeysay ee qoraaga aad jeceshahay. Si kastaba ha noqotee, maahan inay noqoto sheeko cusub. Waxay kuxirantahay shakhsiyadaada, taariikh nololeedkaaga, buug caafimaad, iyo xitaa sheeko sawiro sidoo kale waxay sameyn karaan hadiyado waa weyn.
CD-ga muusiga ama vinylku wuxuu sameeyaa hadiyado waaweyn. Tixgeliyey albamkii ugu dambeeyay ee fanaankaas uu caabudo ama qaar ka mid ah album-yada quraafaadka ah, mid ka mid ah kuwa waqtiyada iyo noocyada ka sarreeya oo aan ka maqnaan karin diskooga. Shuruucda la raacayo markay tahay filimada waa isku mid: kii ugu dambeeyay ee aad ka hesho agaasimaha aad jeceshahay ama jilaaga ama haddii kale, filim DVD ama Blu Ray ah oo aadan weli ku haysan ururintaada.
Taxanaha Braun 9
Aad ayey u adag tahay in lagu khaldamo hadiyad daryeel shaqsiyeed. Tixgeli xirmo qoyan ama dhalo barafaysan. Haddii timaha wajiga ay ka mid yihiin astaamahaaga, a xirmada daryeelka gadhka si ay kaaga caawiso inaad had iyo jeer ka dhigto mid aan iin lahayn.
Laakiin ma jiraan xulashooyin dhammaad leh. Kuwa soo socdaa waa Hadiyadaha qurxinta ragga kale ee mudan in laga fiirsado:
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Maxaa la siiyaa nin
Khuraafaadka iyo xaqiiqooyinka ku saabsan precum